Database Njengesevisi (DaaS)
ULwesine, May 27, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule, ngibe nenjabulo yokulalela i-ExactTarget Chief of Operations, uScott McCorkle, ekhuluma ngokuvela kwepulatifomu yabo. Ngibhale esikhathini esedlule ukuthi ngiyakholelwa Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili bagxume ushaka - futhi kubonakala sengathi ama-ESP acabanga phambili asevele aqaphele.
UScott ukhulume nenhloso ye-ExactTarget yokuba ngu- Ukukhangisa Hub yezinkampani. Esikhundleni sokumane nje ube injini yokuthumela i-imeyili, i-ExactTarget icindezela ukuba ibe yindawo yokugcina imininingwane yamakhasimende ayo amaningi ngezinhloso ezilandelayo:
Ukuhlanganiswa kwedatha nokufinyeleleka - ngokusebenzisa i-API ephelele, izandiso zedatha eqinile kanye nengqalasizinda evikelekile, eqinile, kungenzeka manje ukuthi izinkampani zisingathe futhi zisebenzise i-ExactTarget njengomthombo ophephile, ohambisana nokugcina idatha yamakhasimende abo.
Imithetho Yokubaluleka - ngoba i-ExactTarget idlulisa imiyalezo nge-imeyili, izwi, i-SMS kanye nemithombo yezokuxhumana, idatha yokuziphatha ingabanjwa, igcinwe futhi isetshenziselwe ukuthuthukisa ukuhambelana kwemiyalezo kulawo makhasimende.
Ukulethwa Kwezokuxhumana - I-ExactTarget inezinhlelo ezisheshayo zokuphatha imeyili embonini futhi imodeli yazo ye-OEM iyaqhuma ngenxa yokusebenza kohlelo. Kungezwe kulokhu yi-Voice, SMS futhi, ngemuva kokuthengwa kwe-CoTweet, mhlawumbe imiyalezo yezokuxhumana.
Kukalwa Kuko Konkhe - I-ExactTarget ifuna ukuqedela umbuthano ngokunikezela ngesilinganiso esiqinile kukho konke ukuxhumana okuphumayo.
Ukugcina idatha bekubonakala kakhulu njengemvelo yeSoftware njengesevisi Ukuphathwa Kwobudlelwane Nabathengi (CRM) services, kepha ezinye izimboni sezihamba ngale ndlela. Umhlinzeki wezibalo, iWebtrends, wethule eyabo Isivakashi Idatha Mart, evumela ukuhlukaniswa okunamandla nokuhlukaniswa okwakhiwe ngqo kumkhiqizo. I-Webtrends ine-REST ephezulu API futhi, kuhambisana nenjini ehamba phambili yezibalo, ukusingatha i-database yamakhasimende akho nge-Webtrends kunikeza abathengisi abanohlonze ngamathuluzi athile anamandla okukhomba nokukala ukuxhumana.
Isizindalwazi njengesevisi sethulwe eminyakeni embalwa eyedlule nabahlinzeki abanjengo-Amazon neGoogle banikela ngemininingwane yolwazi elula ephethwe efwini. Konke kuhle futhi kuhle, kepha ngaphandle kwezicelo zokusebenzisa leyo datha, imboni empeleni ayikaze yamukelwe njengabantu abaningi abantu babecabanga ukuthi kuzoba njalo. Inzuzo izinkampani ezinjenge-ExactTarget neWebtrends abanayo ukuthi banokuxhumana okufakazelwe futhi analytics imikhiqizo isivele ikhona phezu i-DaaS.
Yize bonke laba bahlinzeki benokuhlanganiswa okuqinile komunye nomunye, kubonakala sengathi bazokhuphisana ngokwengeziwe ukuze babe ngumthombo oyinhloko wemininingwane yamakhasimende. Abahlinzeki be-Ecommerce, CRM, Email kanye ne-Analytics bonke bazobe befuna ukuthi babe yi-database yamarekhodi futhi bonke maduzane bazohlinzeka ngezinsizakalo zokugcina idatha yakho, ukuhlinzeka ngemiyalezo eqinile futhi analytics ngemininingwane yakho. Lowo ongumnikazi wedatha ungumnikazi weklayenti - kanjalo SaaS abahlinzeki abafuna ukuba yi-Database njengoba abahlinzeki Besevisi bazoqhuma ngonyaka olandelayo. Leli isu elihle kakhulu kubahlinzeki be-SaaS kusukela ukufuduka noma ukushiya umhlinzeki wakho kuba nzima kakhulu uma sebephethe i-database yakho!
Tags: insizaIsithambisigoogle plus ibhejiizincwadi zokumakethaucwaningo lwe-pewSesha MarketingUkubika KomphakathiWisdomtiawpengine